ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု, ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာ | USAHello | USAHello
အဆိုပါဝန်ဆောင်မှု, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်စောင့်ရှောက်မှုအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ. သငျသညျပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်ယူနိုငျသောကွဲပြားခြားနားသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာလမ်းခရီးအကြောင်းကို Read. သင်လိုအပ်သင်တန်းနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာဖွေနေစတင်ရန်ရာအရပျနဲ့ပတျသကျတဲ့အထဲက Find.
အလုပ်အကိုင်ဆံပင်အလှပြင်ဆိုင်နှင့်ကလေးထိန်းများအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၏သန့်ရှင်းရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအနေဖြင့်အရာခပ်သိမ်းတို့ပါဝင်သည်. ဒီအမျိုးအစားန်ဆောင်မှုများ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတော်များများဟာလက်မှတ်သို့မဟုတ်အဆင့်မြင့်ပညာရေးမလိုအပ်ပါဘူး. ဒါပေမယ့်ငွေပေးချေမှု( လစာ) မကောင်းမ.
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု, တိုက်ရိုက်ဝန်ဆောင်မှုများ, သန့်ရှင်းရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်တာမရရှိနိုင်အလုပ်တွေအများကြီးနဲ့အတူအားလုံးကြီးထွားလာဒေသများဖြစ်ကြသည်. ဒီအကြောင်းရင်းများစွာရှိပါသည်:
တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှု – အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်ရေးတိရိစ္ဆာန်များကိုခံစားသောလူများအတွက်ကြီးထွားလာဧရိယာဖြစ်ပါသည်.
အမှုထမ်း– န်ဆောင်မှုများ၏ပစ္စုပ္ပန်ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်ရုပ်ရှင်ရုံ, ဖျော်ဖြေရေးနေရာများ, ကာစီနိုလောင်းကစားရုံနဲ့ဖျော်ဖြေရေးပန်းခြံများအတွက်အများပြည်သူပဲ့ပြင်.
ကလေးတွေဂရုစိုက်ပါ – ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး၏လယ်ပြင်တွင်အလုပျသမားမြားအတှကျဝယ်လိုအားနေ့ကပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး, ကျောင်းများနှင့်ပုဂ္ဂလိကနေအိမ်များစင်တာများအတွက်တိုးပွားလာနေသည်.
အထူးကုအလှကုန် – စောင့်ရှောက်မှုကြောင့်လူအရေကိုချွတ်နှင့်အလှအပကုသမှုအမျိုးမျိုးတို့ကိုတစ်ကြီးထွားလာစက်မှုလုပ်ငန်းများမှာပေး.
ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်အပန်းဖြေ – ကြံ့ခိုင်ရေးသင်တန်းဆရာများနှင့်အလုပ်၏ဖျော်ဖြေရေးဒေသများ၏ခေါင်းဆောင်များကြီးထွားလာနေကြတယ်.
ဆံပင် stylist – cut ဆံပင်ဒီဇိုင်းကိုတစ်ခုချင်းစီကိုပြည်နယ်အဘို့သင်တန်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်လိုအပ်ပါတယ်.
နေရာထိုင်ခင်းထိန်းသိမ်းရေးအိမ်များနှင့်အိမ်ဖော် – ပုဂ္ဂလိကနေအိမ်များနှင့်ဟိုတယ်များအတွက်သန့်ရှင်းရေးနှင့်အခြားအိမ်ထောင်စုတာဝန်များကိုလုပ်ဆောင်သောသူလူပုဂ္ဂိုလ်များကိုမကြာခဏနာရီလုပ်ကိုင်ဖို့အတင်းအကျပ်နေကြသည်လူမှုရေးဖြစ်ပါသည်.
တံခါးစောင့် – ကြီးမားသောအဆောက်အဦများတွင်မိုးသည်းထန်စွာသန့်ရှင်းရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၏လုပ်ငန်းတာဝန်များအားလုပ်ဆောင်သောသူလူပုဂ္ဂိုလ်များ. ဒါကအလုပ်အကိုင်နေရာလွတ်များတိုးမြှင့်နံပါတ်များတည်ရှိသောအလုပ်ဖြစ်ပါသည်.
အစိမ်းရောင်ဥယျာဉ်ကိုအာကာသအထူးကု – ဂရုစိုက်ခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားအဆောက်အဦးပတျဝနျးကငျြဒေသများအဖြစ်ပိုကြီးတဲ့ရင်ပြင်နှင့်ရှုခင်းဒေသများ, ဖန်တီးဖို့ပြည်ပမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်, အများပြည်သူပန်းခြံများ.
နောက်ပြီး / pedicurist – ဒါဟာပရော်ဖက်ရှင်နယ်သင်တန်းနှင့်အချို့သောလက်မှတ်လက်သည်းအလုပျသမားမြား၏အလုပျလိုအပ်ပါတယ်.
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှုလက်ထောက် – ထိုကဲ့သို့သောသက်ကြီးရွယ်အိုများအဖြစ်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီလိုသူကိုလူတို့အဘို့ဂရုစိုက်. ဤအလျင်မြန်ဆုံးကြီးထွားလာအလုပ်အကိုင်တစ်ခုဖြစ်တယ်.
ကြီးကြပ်သူ – အဆိုပါအိမ်ဖော်အသင်းအနေအထားနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအသင်းဆက်လက်ထိန်းသိမ်းများစွာသောအဖွဲ့များသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏မန်နေဂျာသူတို့ရဲ့အလုပ်ရှိတယ်ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြ.
ဤသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ functions, ဒါကြောင့်အများကြီးဒေသများ၏တဦးတည်းသင်တို့အဘို့သင့်လျော်သောဖြစ်စေခြင်းငှါ,. သင်ဤရုံး၏လုပ်ငန်းဆောင်တာမဟုတျကွောငျးအထက်ပါစာရင်းကိုဖတ်ရှုခြင်းကနေမြင်ရပါလိမ့်မည်. ဒါဟာလူအများစုရုံးအတွက်ဖြစ်ချင်ဒါမှမဟုတ်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာအချိန်အများကြီးမဖြုန်းပါနဲ့ကိုက်ညီ. သူတို့ထဲကတချို့ကထိုကဲ့သို့သောတယောက်နဲ့တူပါတယ်, ဥယျာဉ်မှူးနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးမှသင်တန်းဆရာအဖြစ်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်တွေအများကြီးလိုအပ်.
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး၏လုပ်ငန်းဆောင်တာအလွန်ရုပ်ပိုင်း function ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကြသည်မဟုတ်. သူတို့ကသူတို့ရဲ့သည်းခံခြင်းလူသိများနှင့်ကောင်းမွန်သောနေသောအခြားသူများအတွက်ချစ်ပြီးဂရုစိုက်သူတွေကို fit. ညဦးယံ၌အလုပ်လုပ်ရန်မလိုအပ်သူကျောင်းသားများသို့မဟုတ်အခြားသူများတချို့ကောင်းသောအလုပ်သန့်ရှင်းရေးရုံးများနှင့်ဆက်စပ်ဂျော့ဘ်. ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနှင့်အလှအပန်ဆောင်မှုများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပိုင်ဆိုင်လိုလားသူတစ်ဦးအဘို့ကောင်းသောဖြစ်လိမ့်မည်.
သငျသညျဒုက္ခသည်တစ်ဦးဖြစ်မည်ဆိုလျှင်, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စုဆောင်းမှုအစီအစဉ်၏အေဂျင်စီ Re-မူပြောင်းခြင်းတောင်းဆိုဖို့စတင်နိုင်ပါသည်. ထိုကဲ့သို့သောဟိုတယ်များအဖြစ်အတော်များများအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဒေသခံအလုပ်ရှင်နှင့်အတူရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများဆက်ဆံရေး၏ပြန်လည်နေရာချထားရေး,. သူတို့ထဲကတချို့ကလေ့ကျင့်ရေးလည်းအစီအစဉ်များကိုကမ်းလှမ်းမှုအလုပ်လုပ်. ဒုက္ခသည်များ၏စုဆောင်းမှုတစ်စမတ်ပြောင်းရွှေ့ကြောင်းယုံကြည်သောသူဟိုတယ် Read
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝန်ဆောင်မှု, သန့်ရှင်းရေးနှင့်မည်သည့်သင်တန်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုမလိုအပ်ပါဘူး. ဥပမာအားဖြင့်, နေရာထိုင်ခင်းအလုပ်သမားများတစ်ဦးကြီးကြပ်ရေးမှူးသို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကအသစ်တစ်ခုကိုအိမ်မှာပြဇာတ်ရုံဒါမှမဟုတ်အလုပ်အပေါ်အသစ်တစ်ခုကြီးကြပ်ရေးမှူးလေ့ကျင့်ကြလိမ့်မည်. ဒုက္ခသည်များ၏စုဆောင်းမှုတစ်စမတ်ပြောင်းရွှေ့ကြောင်းယုံကြည်သောသူဟိုတယ် Read.
ကို Maintenance လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်အခြားဝန်ဆောင်မှုတချို့လေ့ကျင့်ရေးလိုအပ်ပါတယ်. ရပ်ရွာကောလိပ်များသန့်ရှင်းရေးတို့အတွက်အသုံးဝင်သောအဆိုပါစနစ်၏ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်သင်တန်းများပူဇော်. သူတို့ကအစ Landscaping, ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနှင့်အရေပြားစောင့်ရှောက်မှုအတွက်သင်တန်းများပူဇော်. သငျသညျအနီးအသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်ရှာရန်
အများအပြားဆံပင်နှင့်အလှအပအတွက်အထူးကျောင်းများလည်းရှိပါသည်. အလှကုန်ကျောင်းများ၏အမေရိကန်အသင်းကအသိအမှတ်ပြုတစ်ဦးကိုရှာဖွေ. ဒါဟာသူတို့ရဲ့အသုံးအနှုန်းများအတွက်လိုင်စင် Mr_khaso လက်သည်း, ဆံပင်နှင့်အလှဖြစ်ရပါမည်.
သင်လုပ်နိုင်သည် သင့်ရဲ့ပြည်နယ်အတွက်လိုအပ်ချက်များကိုလိုင်စင်ရှာရန်သငျသညျအကွောငျးကိုပိုမိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ် ဆံပင်နှင့်အလှအတွက် Professional ကပုဒ်.
သငျသညျအိမ်မှာသားသမီးတို့အဘို့ဂရုစိုက်ဖို့လိုင်စင်မလိုအပ်ပေမယ့်တစ်ဦးသင်တန်းအွန်လိုင်းသင်တစ်ဦးအလုပ်ကိုကူညီရှာဖွေစေခြင်းငှါမပြုကြ. ကြက်ခြေနီသင်အွန်လိုင်းလုပျနိုငျသားသမီးများ၏စောင့်ရှောက်မှုများအတွက်သင်တန်းတီထွင်ထားသည်. သင်တစ်ဦးလက်မှတ်ရရှိမည်. ကြက်ခြေနီအွန်လိုင်းသားသမီးများ၏စောင့်ရှောက်မှုအပေါ်လေ့ကျင့်ရေးကိုထောက်ပံ့ပေး
သင်သည်အခြားတိုင်းပြည်ကနေအရည်အချင်းပြည့်မီသို့မဟုတ်ဒီဂရီရှိပါက Upwardly ကမ္တာ့ အလုပ်လုပ်အသိအမှတ်ပြုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ, ဒုက္ခသည်များနှင့်ဗီဇာကိုင်ဆောင်သူအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်များကိုပြန်လည်စတင်ဖို့ကူညီပေးသည်.
သင်ကူညီမရှိအဖွဲ့အစည်းကရှိပါတယ်လျှင်သင်မြင့်မားသောဝယ်လိုအားနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်လျှောက်ထားသင့်ပါတယ်စတင်နိုင်ပါသည်. အစိုးရအလုပ်အကိုင်စင်တာများအခမဲ့. အကွံဉာဏျပေးနှင့်ဒေသခံအလုပ်အကိုင်များများစာရင်းကိုစောင့်ရှောက်. သူတို့ဟာ CVs နှင့်စီးပွားရေး applications များကူညီပေးနေကြပါသည်. သငျသညျအလုပ်အကိုင်နှင့်ပညာရေးလေ့ကျင့်ရေး၏စင်တာများ Aousolk နိုင်ပါတယ်. သငျသညျစင်တာငှားရမ်းအနီးဆုံးရှာဖွေပါ